बुलबुल नेपाल | र्‍यापर करिश्मा भन्छिन्– ‘निर्मलाका हत्यारालाई तेलमा तारेर मार्नुपर्छ’ [भिडियोसहित]
काठमाडौं, कार्तिक १७ । कैलालीको अत्तरियाकी करिश्मा बिष्टको चर्चा शिखरमा छ । ‘एपीवान टेलिभिजन’ बाट प्रसारण भइरहेको गायन प्रतियोगिता ‘नेपाल आइडल सिजन-२’ मा आफ्नै शैलीको र्‍याप गाएर उनको चर्चा शिखरमा पुगेको हो ।
करिश्मासँग गरिएको कुराकानी हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्-
चर्चामासँगै करिश्मालाई थुप्रै अवसरहरु पनि आइरहेका छन् । केही दिनअघि मात्रै उनले हास्य टेलिश्रखला ‘खुल्दुली’ मा र्‍यापरको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएकी छन् । अहिले करिश्मा काठमाडौंमा छिन् ।
यहीँ मेसोमा उनका अन्तर्वाता पनि एकपछि अर्को युट्युमा आएका छन् । र, चर्चा कमाइरहेका छन् । यसैबीच, विभिन्न स्टेज कार्यक्रममा गीत गाएर चर्चा कमाएका गायक एवं कार्यक्रम प्रस्तोता सागर जोशीले पनि करिश्मासँग कुराकानी गर्न भ्याएका छन् ।
कुराकानीका क्रममा सागरले करिश्मालाई ‘नेपाल आइडल’ को यात्रा, त्यसपछिको स्रोता-दर्शकको प्रतिक्रिया, परिवारको सहयोग, निर्मला पन्त हत्या प्रकरणलगायत विषयमा रहेर कुराकानी गरेका छन् । करिश्माले नेपाल आइडलपछि परिवार, स्रोता-दर्शक लगायत शुभचिन्तकबाट राम्रो साथ पाइरहेको बताइन् ।
अहिले आफू विगतभन्दा व्यस्त पनि रहेको जानकारी गराइन् । उनले भनिन्, ‘केहीदिन अघि मात्र हास्य टेलिश्रखला ‘खुल्दुली’ मा र्‍यापरको भूमिका निर्वाह गरेकी छुँ, मलाई टेलिश्रखला टिमले नै यहाँ बोलाएको हो । यस अलवा थुप्रै कार्यक्रममा व्यस्त छुँ ।’
कार्यक्रम प्रस्तोता सागरले एकसय दिन बढी हुँदा पनि निर्मलाका हत्यारा पक्राउ किन परेनन् होला भनेर करिश्मालाई प्रश्न गरे ? घटनाका दोषी पत्ता नलाग्नुमा करिश्माले प्रहरीको लापरबाही हुनसक्ने बताइन् । सागरले त्यहीमाथि अर्को प्रश्न थपे, उनले भने, ‘करिश्मा जि निर्मलाका हत्यारालाई कस्तो सजाय हुनुपर्छ ?’
उनले जवाफ दिइन्, ‘निर्मलाका हत्यारा पक्राउ नपर्नु निकै दुःखको कुरा हो । यतिका दिन विते तर निर्मलाका आफन्तले न्याय पाएका छैनन् । आशा गरौं ढिलै भएपनि एक दिन दोषी पत्ता लाग्छ होला । मेरो विचारमा निर्मलाका अपराधिलाई ठाउँको ठाउँ गोली ठोक्नुपर्छ ।’
करिश्माले यति मात्रै होइन निर्मलाका हत्यारालाई तेलमा तारेर मार्नुपर्छ समेत भनिन् । उनले निर्मलाको बारे मात्रै नभई अन्य थुप्रै कुरा पनि गर्न भ्याएकी छन् । के-के विषयमा करिश्माले कुराकानी गरेकी छन् त ? तपाई पनि हेर्नुस् करिश्मासँगको कुराकानी ।
Tags : #Karisma Bist #Nirmala Pant #Kanchanpur